မာမာအေး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 4
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၂) - Mar Mar Aye
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၉) - Mar Mar Aye
ဦးရှံစား မာမာအေး နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ (ဓာတ်ပုံ – Morning Post ဂျာနယ်) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့...
သက်တံပေါ်က မာမာအေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ၀င်းငြိမ်း/ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတိုင်ခင် တုန်းက ကျွန်တော်တို့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် စာမျက်နှာများ...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” Mar Mar Aye – 444
မာမာအေး နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂m သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး No tags for this post. Related posts No related...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၄၃) – Mar Mar Aye
မာမာအေး အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ No tags for this post....
မာမာအေး အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ No tags for this post. Related posts...
မာမာအေး အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် (ဓာတ်ပုံ -ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း) မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေ No...
(ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင်) မာမာအေး။ အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ (ဓာတ်ပုံများ -ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။...
– ပိတောက်လမ်း ဆိုရအောင် – ၃ မာမာအေး စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပိတောက်လမ်း ဆိုရအောင် – ၂ မာမာအေး စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ (အသံဖိုင်) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ No tags...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၄၇) – Mar Mar Aye
ပိတောက်လမ်း ဆိုရအောင် မာမာအေး စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး Tags: ပြည်တွင်းစစ် Related posts ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော နောက်ခံအကြောင်းအရာများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း (3)...
Mar Mar Aye – 438
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၈) မာမာအေး စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ မကြာသေးခင်က လန်ဒန်မှာ တွေ့ရတဲ့ ဒေါ်မာမာအေး နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – Getty Images)...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၆) – Mar Mar Aye
မာမာအေး သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၂ “——သူတို့ပေးတဲ့အနုပညာကြေး ကျပ် ၅၀ိ/-ဟာ မာအေး ဓါတ်ပြားရောင်းဈေးကို တစ်ဆယ်ကျပ်နဲ့ဘဲ ထားဦး၊ ဓါတ်ပြား (၅)ချပ် ရောင်းပြီးတာနဲ့တင် ကျေပါပြီ။ အနည်းဆုံး ဓါတ်ပြားချပ်ပေါင်း (၅၀၀)...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၅) – Mar Mar Aye
မာမာအေး သြဂုတ် ၁၉၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ No tags for this post. Related posts No...
မာမာအေး သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၁၂ “ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရာဝယ်၊ အမှန်တကယ် ဘုံဓလေ့ဘ၀မှာကွယ်၊ သံသရာတကွေ့ တွေ့ကြပြန်ရာဝယ်” No tags for this post. Related posts No related...
မာမာအေး သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၂ “… ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဂီတသမားတွေဖက်က မပြောတတ် မဆိုတတ်လို့ ဗဟုသုတရှိဖို့ စာမဖတ်လို့ ခံရတဲ့ဖက်မှာ နေရာ အရများနေကြောင်း သိနေတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲဘဲ ငယ်တုန်းက ငယ်သေးလို့ ကြီးလာတော့လဲ...
မာမာအေး ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၂ “…ဟိုက အဆိုတော်တွေ ဓါတ်ပြားတချပ်လောက် အောင်မြင်တာနဲ့ ထိုင်စားရော့ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒီအသိ ရလာတော့ သူတို့ဘာကြောင့် ဒီလိုနေသွားနိုင်တာလဲ – စပ်စုတယ်လေ။ ဒီတော့ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးနဲ့...
ဒီဇိုင်း ဂရပ်ဖစ်ကိုမျိုး – ဟက်ပီးဘတ်ဒေး မာမာအေး
ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဂီတပညာရှင် တေးသံရှင် ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ပြည့် မွေးနေ့ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်၏ ဂန္ထ၀င်ဂီတပညာရှင်၊ တေးသံရှင်၊ ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ချစ်ခင်သူ မိတ်ဆွေများနှင့်...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၁) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၂ သဇင် သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … No tags for this post. Related posts No related posts.